ကိုယ့်စိတ်က လေးတော်တော်မှဖျားနေပြီလား… – Trend.com.mm
Posted on March 31, 2019 March 26, 2019 by Shun Lei Phyo
လူကတော့နေကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ဘယ်တောပမှမလန်းဆန်းပဲ အတွေးတွေတဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။ လူကျန်းမာပင်မဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖျားနေတက်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက် ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းသာ နားလည်မြင်သာနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးရောဖျားနေသလား။
သေချာပါတယ်သင့်စိတ်ကလေးဖျားစပြုလာပါပြီ။ စိတ်ခံစားချက်ကြီးကြီးမားမားတွေခံစားခဲ့ရပြီး နာကျင်ကြေကွဲပေါင်းများခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဟာ မတည်ငြိမ်ပဲ လူတော်တော်များများနဲ့စကားပြောရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတက်ပြီးကြာလာတော့လူတွေနဲ့စကားပြောရမှာတောင်ကြောက်နေတက်ကြပါတယ်။
သူတို့အတွက်ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ၊ ကရုဏာတွေဆိုတာ ကြားဖူးရုံသာရှိတက်ကြတာပါ။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီကမှ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကို မခံယူခဲ့ရဘူးတာမျိုး(သို့) သူတို့အရမ်း ချစ်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီက ရက်စက်မှုကိုခံစားခဲ့ရတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာနာကျင်နေတက်ကြပါတယ်။
စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသူ(စိတ်ကလေးဖျားနေသူ)တွေဟာ သီးသန့်တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်တက်ကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပေါ်ကိုမှယုံကြည်သက်ဝင်ချင်းမရှိတော့တာကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်သမျှ ၊ ကြုံသမျှကို လျို့ဝှက်ထားတက်ပြီးကိုယ့်ဘာသာပဲ ကြိတ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတက်ကြပါတယ်။
လူတွေဆီက အပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့တာကိုပဲကြားနေရပြီး ချီးကျူးစကားကို မရရှိတက်ကြပါဘူး။ ကြာလာတော့ဒီလိုစကားတွေ အတင်းအဖျင်းတွေကြားမှာနေသားကျပြီး ရုန်းထွက်ဖို့မကြိုးစားတော့ပဲ သူတို့ပြောသလို ပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်ကာကိုယ့်ဘ၀ကိုသံချေးတက်ခံနေတက်ကြပါတယ်။
5. အပျော်ပါးတွေကို မမက်မောသူ
သူ့အရွယ်နဲ့သူခံစားရတဲ့လောကရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေသာယာမှုတွေ နောက်ကို လိုက်ခံစားရမှာ တွန့်ဆုတ်နေတက်ကြပြီး ဖျော်ဖြေရေးတွေ ၊ အပျော်အပါးတွေကို စိတ်ရှုပ်စရာ စိတ်ပျက်စရာလို့တွေးတောတက်လာကြပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသူတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကို မထိန်းသိမ်းတဲ့ အပြင်ကိုယ့်ကျန်းမာရေး နဲ့ပတ်သတ်ရင်လည်း သေရင်သေပါစေ ဆိုပြီး သိပ်ဂရုစိုက်လေ့မရှိကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်က မကျန်းမာတာကြောင့်တစ်ခြားအရာတွေကို ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်လိုစိတ်မရှိတက်ကြပါဘူး။
စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အယူအဆ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သိပ်ပြီး သဟဇာတ မဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့က အကောင်းပြောတာတောင် ကိုယ်တိုင်ကမယုံကြည်တဲ့စိတ် မကောင်းမြင်တက်တဲ့စိတ်တွေစိုးမိုးနေတာကြောင့်လူတွေကြားမှာထော်လော်ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေတက်ပါတယ်။
လူကတော့နကေောငျးပါရဲ့ဒါပမေဲ့ ဘယျတောပမှမလနျးဆနျးပဲ အတှေးတှတေဲ့ပွညျ့နတေဲ့သူတှရှေိကွပါတယျ။ လူကနျြးမာပငျမဲ့စိတျကလေးကတော့ဖြားနတေကျတယျဆိုတာစိတျခံစားခကျြ ခငျြးတိုကျဆိုငျတဲ့သူတှအေခငျြးခငျြးသာ နားလညျမွငျသာနိုငျတဲ့အရာတှပေါ။ ကိုယျ့စိတျကလေးရောဖြားနသေလား။ အောကျကအခကျြလေ1. သငျဟာလူတှနေဲ့စကားပွောရမှာစိတျလှုပျရှားနတေကျတယျသခြောပါတယျသငျ့စိတျကလေးဖြားစပွုလာပါပွီ။ စိတျခံစားခကျြကွီးကွီးမားမားတှခေံစားခဲ့ရပွီး နာကငျြကွကှေဲပေါငျးမြားခဲ့တာကွောငျ့စိတျဟာ မတညျငွိမျပဲ လူတျောတျောမြားမြားနဲ့စကားပွောရာမှာ စိတျလှုပျရှားနတေကျပွီးကွာလာတော့လူတှနေဲ့စကားပွောရမှာတောငျကွောကျနတေကျကွပါတယျ။2. ကရုဏာဆိုတာမခံစားခဲ့ရသူသူတို့အတှကျဂရုစိုကျခွငျးတှေ ၊ ကရုဏာတှဆေိုတာ ကွားဖူးရုံသာရှိတကျကွတာပါ။ ဘယျသူတဈဦးတဈယောကျစီကမှ စဈမှနျတဲ့မတ်ေတာကို မခံယူခဲ့ရဘူးတာမြိုး(သို့) သူတို့အရမျး ခဈြရတဲ့လူတဈယောကျဆီက ရကျစကျမှုကိုခံစားခဲ့ရတာကွောငျ့ စိတျထဲမှာနာကငျြနတေကျကွပါတယျ။3. လြို့ဝှကျခကျြထားရငျးနထေိုငျရသူစိတျကဝြဒေနာခံစားနရေသူ(စိတျကလေးဖြားနသေူ)တှဟော သီးသနျ့တဈယောကျတညျးနထေိုငျတကျကွပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတဲ့အကွောငျးအရငျးတှကေတော့မညျသူတဈဦးတဈယောကျပျေါကိုမှယုံကွညျသကျဝငျခငျြးမရှိတော့တာကွောငျ့ကိုယျဖွဈသမြှ ၊ ကွုံသမြှကို လြို့ဝှကျထားတကျပွီးကိုယျ့ဘာသာပဲ ကွိတျဖွရှေငျးဖို့ကွိုးစားနတေကျကွပါတယျ။4. လူတှဆေီကအပွဈတငျသံတှကေိုကွားနရေသူလူတှဆေီက အပွဈတငျ ကဲ့ရဲ့တာကိုပဲကွားနရေပွီး ခြီးကြူးစကားကို မရရှိတကျကွပါဘူး။ ကွာလာတော့ဒီလိုစကားတှေ အတငျးအဖငျြးတှကွေားမှာနသေားကပြွီး ရုနျးထှကျဖို့မကွိုးစားတော့ပဲ သူတို့ပွောသလို ပဲလို့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျမှတျကာကိုယျ့ဘဝကိုသံခြေးတကျခံနတေကျကွပါတယျ။5. အပြျောပါးတှကေို မမကျမောသူသူ့အရှယျနဲ့သူခံစားရတဲ့လောကရဲ့ ပြျောရှငျမှုတှသောယာမှုတှေ နောကျကို လိုကျခံစားရမှာ တှနျ့ဆုတျနတေကျကွပွီး ဖြျောဖွရေေးတှေ ၊ အပြျောအပါးတှကေို စိတျရှုပျစရာ စိတျပကျြစရာလို့တှေးတောတကျလာကွပါတယျ။6. ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျမနထေိုငျဘူးစိတျဓာတျကဆြငျးသူတှဟော ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပွငျဆငျမှုကို မထိနျးသိမျးတဲ့ အပွငျကိုယျ့ကနျြးမာရေး နဲ့ပတျသတျရငျလညျး သရေငျသပေါစေ ဆိုပွီး သိပျဂရုစိုကျလမေ့ရှိကွတော့ပါဘူး။ ကိုယျစိတျကိုယျက မကနျြးမာတာကွောငျ့တဈခွားအရာတှကေို ကောငျးမှနျအောငျထိနျးသိမျးပွုပွငျလိုစိတျမရှိတကျကွပါဘူး။7. လူတှနေဲ့သိပျမဆငျမပွဘေူးစိတျကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့သူတဈယောကျရဲ့အယူအဆ အသုံးအနှုနျးတှဟော ပတျဝနျးကငျြနဲ့သိပျပွီး သဟဇာတ မဖွဈပါဘူး။ သူတို့က အကောငျးပွောတာတောငျ ကိုယျတိုငျကမယုံကွညျတဲ့စိတျ မကောငျးမွငျတကျတဲ့စိတျတှစေိုးမိုးနတောကွောငျ့လူတှကွေားမှာထျောလျောကနျ့လနျ့ကွီးဖွဈနတေကျပါတယျ။
သူ့အချစ်တွေကို သင်တကယ်မပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးေ တွက ပြောပြ နေ…